Ampidino Google Chrome 87.0.4280.141 ho an'ny Windows
Sehatra: Windows Version: 87.0.4280.141 Fiteny: English
Maimaimpo Ampidino ho an'ny Windows (66.70 MB)
Ampidino Google Chrome,
Google Chrome dia mpizaha Internet tsotra sy tsotra ary malaza. Ampidiro ny tranokala Google Chrome, mivezivezy haingana sy milamina aminny Internet. Google Chrome dia mpizaha Internet maimaimpoana sy malaza miaraka aminny haitao marani-tsaina ani Google.
Ny safidy voalohany ampiasainny mpampiasa maro izay te-hijery Internet haingana sy azo antoka, ny kinova farany anny tranokala Chrome dia azo sintonina mora foana aminny fipihana ny bokotra fampidinana Google Chrome etsy ambony, azonao atao ny mametraka Chrome aminny Windows PC anao. fiheverana miaraka aminireo endriny mandroso.
Ahoana ny fametrahana Google Chrome?
Miaraka amini Chrome, izay manana mpikirakira mpampiasa tsotra sy tsotra, afaka mifantoka tanteraka aminny zavatra ataonao ianao aminny fitsidihana tranokala ary handraisana dingana iray aminny Internet.
Azonao atao ihany koa ny manamboatra ny browser anao mora foana noho ny plug-in support atolotra ani Chrome. Noho ny firafitry ny tabilao, azonao atao ny manao ny fikarohana aminny alàlanny baranny adiresy ao aminny Internet browser izay ahafahanao mifamadika mora foana tranokala mihoatra ny iray, ary aminny alàlanny fanohananana drag and drop dia afaka mamindra mora foana ireo takelaka tadiavinao ianao. Tsotra be ny misintona sy mampiasa ny browser Chrome.
Azonao atao ny misintona ny rakitra fametrahana ao aminny solosainao aorianny fanindriana ny bokotra fampidinana Google Chrome eo ankavia ambony. Avy eo mihazakazaka ny fitaovana fanamboarana,Afaka mahazo rakitra hafa ilaina aminny Internet ianao.
Mametraka Google Chrome
Famenoana endrika mandeha ho azy, fijerena mivantana ireo rakitra PDF aminny tranokala noho ny mpamaky PDF efa niorina, afaka manohy ny asanao na aiza na aiza tadiavinao miaraka aminny safidinao fampandrindrana, fitehirizana ny teny miafina ary fiasa mahasoa maro hafa, indraindray isika dia mahita mihoatra ny iray mpitety Internet.
Raha jerena ireo mpampiasa izay miahy ny fiarovana azy ireo aminny Internet, dia dinihini Chrome raha azo antoka ho anao ireo pejin-tranonkala izay tsidihinao ary mampitandrina anao momba ilay olana ianao rehefa manandrana miditra aminny tranonkala iray izay voamarika fa manimba aminny lafiny rehetra. Ho fanampinizany, noho ny Mode Privacy ao aminny browser, azonao atao ny mizaha ireo tranokala tsy mitonona anarana nefa tsy mamela soritra ao aorianao.Ny navigateur izay havaozina tsy tapaka ary mitohy mivoatra mifanaraka aminny filanny mpampiasa, dia manolotra safidy fanavaozana ho anireo mpampiasa azy ho azy koa. Aminity fomba ity dia tsy mitsahatra mampiasa ny kinova farany, tsy misy hadisoana ary nohatsaraina ianao.
Eo am-pelatananao tanteraka ny maka ny traikefanao aminny Internet dingana iray lavitra miaraka aminilay mpitety tranonkala izay manolotra anao ny endri-javatra rehetra tokony hanananny mpitety Internet maimaimpoana.
Haben'ny rakitra: 66.70 MB